यी ३ राशिमा चलिरहेको छ साढेसातको दशा, यसरी कम गर्नुहोस् यसको प्रभाव! – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Intresting/यी ३ राशिमा चलिरहेको छ साढेसातको दशा, यसरी कम गर्नुहोस् यसको प्रभाव!
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार शनि न्याय र कर्म अनुसार फल दिने देवता हुन्। मानिसको राम्रो कर्ममा शनि निकै फलदायी हुन्छ भने नराम्रो कर्ममा निकै कष्टदायी हुन्छ। यदि कुनै पनि राशिका मानिसमा शनिको साढेसाती दशा चलेको छ भने त्यो मानिसको जीवनमा जता ततै कष्ट र सामस्या माता आइपर्छ। यस्तो बेलामा उक्त मानिस धेरै बिरामी हुने, सफलता नमिल्ने, परिवारमा झगडा हुने हुन्छ।
यो समयमा शनि मकर राशिमा छ। यस्तोमा धनु, मकर र कुम्भ राशिमा शनिको साढेसाती दशा चलिरहेको छ। शनिको यो दशा सात वर्षसम्म रहिरहन्छ। शनिको साढेसाती तीन चरणमा हुन्छ; पहिलो चरणमा यो दशा निकै कष्टकारी हुन्छ, दोस्रो चरणमा आर्थिक समस्या आउँछ र तेस्रो चरणमा परिश्रम गर्दा पनि सफलता मिल्दैन। यस्तोमा शनिको साढेसाती केहि उपाय गरेर कम भने गर्न सकिन्छ।
पीपलको फेदमा बत्ती बाल्ने:
पीपलको रुखमा देवताको वास हुन्छ भनिन्छ। शनिको दशा चलेको मानिसले हरेक शनिबार बिहान पीपलको रुखमुनि बत्ती बाल्नुहोस्। पीपलको फेदमा बत्ती बालेर जल चडाएपछि शनिदेवको मन्दिरमा गएर दर्शन गर्नुपर्छ। एस्तो गर्दा शनिको दोषबाट छुटकारा मिल्छ।
तोरीको तेल दान:
शनि दोषबाट छुटकारा पाउनको लागि शनिबारको दिन एक कचौरा तोरीको तेलमा आफ्नो अनुहार हेरेर त्यो तेल दान गर्नुहोस्। यस्तो विश्वास गरिन्छ कि शनिबार कसैले तोरीको तेल दान गर्छ भने शनिदेवको अशुभ छायाँ उनीमाथि पर्दैन। यसो गर्दा शनि दोषबाट पनि छुटकारा मिल्छ।
ज्योतिषशास्त्रका अनुसार शनि दोषबाट मुक्त हुन र शनिदेवको अनुग्रह पाउन रुद्राक्षको मालामा १०८ पटक शनिको जप गर्नुहोस्। जसले लगातार शनिको मन्त्र जप गर्छ, उसको समस्याहरू बिस्तारै अन्त्य हुन्छ र घरमा खुशी र समृद्धि छाउनेछ।
ऊं शं शनैश्चराय नमा
हनुमान चालिसा पाठ:
जो मानिस हनुमान चालिसाको जप गर्छन् उनीहरुमा शनिको अशुभ प्रभाव पर्दैन। शनिदेव हनुमानको भक्तलाई कष्ट पुर्याउदैनन्। त्यस्तै कसैको कुण्डलीमा शनिको साढेसाती दशा चलिरहेको छ भने पनि हनुमान चालिसा जप गनुपर्छ।
जसले सँधै गरीब, कमजोर र असहाय मानिसहरूलाई सहयोग गर्छ उनीहरूमा सधैँ शनिदेवको कृपा रहन्छ। यदि तपाईंको कुण्डलीमा शनिको दशा चलिरहेको छ भने कमजोर र गरीब व्यक्तिलाई सहयोग गर्नुहोस्।